Isamsung yazisa ngeempawu ezintsha zesikrini esisezantsi | I-Androidsis
Isamsung ityhila amanqaku amatsha escreen seEdge egobile
UManuel Ramirez | | MWC, Izaziso, Samsung
Sibona ii-terminals ezingaphezulu nangaphezulu ezibonelela ngepaneli yesibini, njenge-LG V10 okanye i-LG X Screen nje, ukuze umsebenzisi abone ngokukhawuleza ukuba unezaziso ezintsha njengemiyalezo, ii-imeyile okanye iifowuni eziphosiweyo. Umkhwa onokuba nokukhubazeka okuncinci kokutya ngakumbi ibhetri, ke ihlala inikezelwa kwizixhobo ezinomthamo omkhulu webhetri okanye ezinenguqulo 6.0 ye-Android eneempawu ezithile eziphawuleka kakhulu ekusebenzeni kwamandla kwesiphelo. Nokuba kunjani, kulo nyaka inokuba yeepaneli zesekondari njengendlela yokubonelela ngezinye izinto ezitsala umdla wabasebenzisi kwaye ngakumbi xa umda weGPS S6 uye wamkelwa ngcono kunokuba bekulindelwe ekuqaleni.
Kolu hlelo lutsha lomda we-Galaxy S7, i-Samsung iyibuyisa loo nto Isikrini esikhethekileyo sesibini evumela ukufikelela kuzo zonke iintlobo zezaziso ukubandakanya, ukuba uyafuna, ezona ndaba zibalulekileyo malunga noqoqosho okanye ezemidlalo ngokudibanisa iindaba ezahlukeneyo. Namhlanje kuxa iSamsung uqobo lwayo isungule ukungena kwiwebhusayithi yayo ibeka izimvo kwezinye izinto ezinqabileyo zesikrini esisecaleni seGreen S7 elandelayo eya kuziswa yinkampani uqobo kwiNkomfa yeHlabathi yeBhola eBarcelona. Phakathi kwezinto ezintsha zepaneli yomphetho sisisombululo esiphezulu esifikelela kwii-pixels ezingama-550 okanye ukhetho lokwenza imicimbi yekhalenda okanye ukuseta ialam.
1 Iindaba ezingakumbi zephaneli yecala
2 Isisombululo esiphakamileyo
3 Abafowunelwa bakho kunye neefowuni ngakumbi
4 Yenza imisebenzi ukusuka kumda
Iindaba ezingakumbi zephaneli yecala
Eli phaneli lijikeleza inyaniso xa kufikwa kuyilo Kuyamangalisa ngokupheleleyo. Igophe kwiscreen elinikezela ngolunye uvakalelo kwaye lichaza i-terminal, i-S7, eya kubandakanya iikona ezijikeleziweyo kwaye kunokuthiwa yiGlass eneyona curves ininzi ukuza kuthi ga ngoku.
Ukuphuculwa kwepaneli kuya kwi umphetho wesikrini uphuculwe kwisisombululo kunye noluhlu lweempawu ezintsha ezivumela ukusebenzisana nayo ukwenza imisebenzi emincinci. Ngokuswayipha okumbalwa uya kuba nakho ukwenza iintshukumo ezincinci kwaye ufumane ulwazi olufanelekileyo ngendlela eya kwelinye inqanaba kunangaphambili kwinguqulelo ye-Galaxy S6.
Inguqulelo yokuqala yesikrini se-Galaxy S6 Isisombululo seepikseli ezingama-260, ethintele ubukhulu becala umxholo onokuthi uboniswe. Ngoku, umvelisi waseKorea uphucule amava omsebenzisi ngokufikelela kwiiphikseli ezingama-550, eziphinda-phinda amathuba omxholo onokuboniswa kule paneli.
Olu hlaziyo kwisisombululo kuthetha ukufika kwe amandla amatsha eya kuyiphucula le ndawo iphambili kakhulu, eyenza ukuba ikwonyuse nokusetyenziswa kwebhetri kuba kukho iipikseli eziphindwe kabini ezibonakaliswe kwiscreen.
Abafowunelwa bakho kunye neefowuni ngakumbi
Isikrini esisezantsi sivumela izinto ezithile ezimangalisayo ezinje ngeepaneli zomphetho, iindlela ezimfutshane kulwazi oluthile kunye nemisebenzi. Abasebenzisi baya kuba nakho ukwenza ngokwezifiso ukuya kwiipaneli ezilithoba Oku kubandakanya abafowunelwa okanye aBantu kunye neeapps.
Iphaneli yokunxibelelana ikuvumela ukuba ube nokufikelela ngokuthe ngqo kubafowunelwa bakho obathandayo kwindawo enye. Ngaphambili eli nqaku lalibonisa iifoto ezincinci kakhulu zoonxibelelwano ezintlanu zomsebenzisi ezibaluleke kakhulu ezazinxulunyaniswe neeprofayili zazo; ngoku ezi ziboniswa phantsi kweefoto ngamava aphuculweyo. Olunye uncedo oluncinci kukufakwa kwe icon kuseto ezantsi ngasekhohlo.
Xa kuziwa kwii -apps, le paneli ngoku ibandakanya amandla okwenza okoukubandakanya ukuya kuthi ga kwizicelo ezili-10 Kwaye nokubanakho ukubonisa yonke iifolda ukuze babe nombutho ofanelekileyo ngakumbi ngokweemfuno zomsebenzisi.
Yenza imisebenzi ukusuka kumda
Le yeyona nto inomdla kakhulu vumela ukwenza imisebenzi njengesiganeko kwiSicwangciso se-S, setha ialam okanye ubhale umyalezo obhaliweyo. Ukhetho lwezixhobo longezwa kubandakanya ikhampasi, isibane esenziwe ngokwezifiso, okanye irula.
Isamsung ngoku ibandakanyile ukubanakho yenza ngokwezifiso ithebhu evumela ukufikelela kwezi paneli zonxibelelwano, iiapps kunye nemisebenzi. Ukwenza umntu kudlula kwisikhundla, ubungakanani kunye nokwenza izinto elubala.
Ezinye izibonelelo zale paneli intsha ziya kuba zezi isoftware entsha ibandakanyiwe Phakathi kwazo kukho ii-Naver V okanye ii-Yahoo zokusebenza ezinje ngezeMali, ezeMidlalo kunye neendaba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Isamsung ityhila amanqaku amatsha escreen seEdge egobile
UHannibal Ardid sitsho
yeyesikrini esiqhelekileyo nayo, icandelo eligobileyo aliphantse libe nescreen
Phendula u-Anibal Ardid
Imifanekiso emibini emitsha yokwenyani yomda we-Samsung Galaxy S7 ihluziwe
Ungayihlengahlengisa njani inqanaba yevolumu yenkqubo nganye kwi-Android